“Waxaanu darsaynaa ilaha dakhliga iyo sida loo gaadhsiiyo qasnada dawladda” | Somaliland.Org
“Waxaanu darsaynaa ilaha dakhliga iyo sida loo gaadhsiiyo qasnada dawladda”
December 15, 2012	Saylac (Somaliland.Org)- Gudoomiyaha Hay’adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq-maasuqa, Axmed Muxumed Madar, oo ku sugan magaalo xeebeeda Saylac ee gobolka Salel ayaa sheegay inay darsayaan illaha dhaqaaluhu ka soo baxo iyo sida loo gaadhsiiyo qasnadda dawladda.
Gudoomiyaha oo shalay kulamo la yeeshay masuuliyiinta gobolka Salal, ka degmada Saylac iyo isu-duwayaasha laamaha dowlada, waxaanu kala hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada ay bulshadda u hayaan, loona ilaalin lahaa maamul wanaaga.
Gudoomiyaha Hay’adda maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq-maasuqa, Axmed Maxamud Madar, ayaa shaxaad ka bixiyey ujeedada socdaalkoodu la xidhiidho.
“socdaalkayagu ujeedadiisu waxa weeyaan, sidii aan u ogaan lahayn sida ay u ururiyaan dakhliga dawlada Hay’adaha dhakhli ururintu iyo waliba sida ay u gaadhsiiyaan qasnada dawlada. dabacan lacagtaa urureysaa waxa weeyaan kharash miisaaniyad sanadeedka lagu sameynayo miisaaniyada dawlada,”ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Axmed Muxumed Madar waxa uu sheegay inay darsayaan meelaha uu ka soo baxo dakhliga dawladdu sida kastamyadda iyo dawladda Hoose, waxaanu yidhi “Socdaalkayagan waxa uu qaadanayaa 7 maalmood ah sida aanu ugu tallo-galay ujeedadiisuna tahay inaanu kormeer ku sameyno meelaha dhakhliga dawlada uu ka soo galo sida kastamyada iyo dawladaha hoose.”
Socdaalka Gudoomiyaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq-maasuqa, ayaa la xidhiidha sidii loo ilaalin lahaa dhakhliga dawlada isla markaana loo yarayn lahaa musuq-maasuqa iyo lunsiga hantida dowlada.
Previous PostBerbera Port situates geographically republic of Somaliland!!!!Next PostKomishanka oo baahiyay natiijo sahayatay laba xubnood, kuwo kalena fursad siinaysa	Blog